Okwu Mmalite nke Suko Ptfe （Uhmwpe） Ram Tube Extruder - SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd.
PTFE (polytetrafluoroethy) bụ nke a na-akpọkarị PTFE, Teflon na King Plastic. Ihe ntanetị nke Teflon bụ igwe nke puru iche na PTFE (UHMWPE) ptubeucts. Site na usoro nke usoro dị ka extrusion, kpo oku, na obi jụrụ, a na-edozi ihe ọkụkụ PTFE ntụ ntụ site na ram tube extruder na ptubeuce PTFE tube ptubeucts nke na-ezute nkọwa dị iche iche. Emetụta ihe ndị metụtara ya dịka iji, nkọwa, ihe ndị e ji arụ ọrụ, ihe ndị ọrụ chọrọ, wdg, Suko nwere ike ịmepụta na ptubeuce PTFE tube igwe nke nkọwa dị iche iche. A na-eji polytetrafluoroethylene (nke dị elu na polyethylene dị elu nke dị elu) ptubeucts nke ram tube extruder ji eme ihe na kemịkal, ọgwụ, mbara igwe, nhazi igwe, mgbanwe okpomọkụ na mpaghara ndị ọzọ.
Suko na ọtụtụ afọ nke nnyocha na mmepe ahụmahụ na ngalaba nke PTFE equipments, specializes na nnyocha, mmepe, ptubeuction na ahịa nke PTFE equipments. Ngwa anyị ejirila ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba iri anọ na mpaghara mba ụwa. Ndị ahịa anyị sitere na ụlọ ọrụ ahụike, ụlọ ọrụ aerospace, ụlọ ọrụ ndị agha, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ụlọ ọrụ nrụpụta dị iche iche dị iche iche, Suko ejiriwokwa ụlọ ọrụ fluoroplastic mba niile mara.
Valueskpụrụ ụlọ ọrụ: Innovation, Technology, arụmọrụ na ọgụgụ isi.
Ozi ụlọ ọrụ: Iji mepụta akara mbụ PTFE nke ụwa. Suko kwesiri ka itukwasi gi obi.
1. Njirimara nke PTFE （UHMWPE） RAM TUBE
Ptubeucts eweputara nwere arụmọrụ dị elu karịa njupụta na ike ike.
PTFE ebule tube extruder ike nọgidere inupụ tube na tube nwere ike ebipụ dị ka chọrọ.
Nye usoro ebu zuru oke, nke gunyere usoro zuru oke nke ngwa ndị kwekọrọ na ya, usoro kpo oku na nsị, sistemụ jụrụ oyi, njikwa okpomọkụ, wdg.
Ekwesịrị ịchịkwa ọnụ ụlọ ụlọ nke osisi ahụ ihe na-erughị 28 Celsius C.
Ngwongwo extrusion a na-ahụ anya na-esi n'elu gaa na ala. A na-etinye akụrụngwa n'elu ikpo okwu ma ọ bụ n'ala ya na elu ya dị ihe dị ka mita 2.8. Ekwesiri ịtụle ụzọ dị irè na ogologo usoro nke ngwaọrụ ahụ, yana ị ga-enwerịrị ogo dị elu n'okpuru oghere okirikiri nke ngwaọrụ ahụ iji mezuo ihe achọrọ ogologo nke extruded PTFE ọkpọkọ.
3. ISI AKWQKWỌ AKWUKWỌ
4. AKWIPKWỌ AKWUKWỌ AKW MKWỌ NA DIAGRAM NKWU OLDLỌ
Ngwaọrụ Ngwaọrụ NKP150 PFG300 PFG500
Usoro Vetikal Ram Extruder M / c
Ike KW (Igwe Eletriki) 15kw 22kw 72kw
Ogologo OD 20-150mm 150-300mm 300-500mm
THK Ndidi 0.1-0.2mm 0.1-0.2mm 0.1-0.2mm
OD Ndidi 0.1-0.5mm 0.5-2mm 3mm
Ogologo tube tube Gaa n'ihu extrude na ogologo na-akparaghị ókè
Mmepụta Kwa Oge KG 8+ 10+ 13+
5. Ngwunye akụrụngwa NA DIAGRAM NKWU OLDLỌ
6. AKW OPKWỌ AKWERKWỌ AKWMENTKWỌ
Lelee ma akụrụngwa ike-na voltaji na ike egwuregwu, na akara njikọ kwekọrọ wiring esereese.
Lelee ọnọdụ mmanụ hydraulic ma chọpụta ma e jikọtara usoro hydraulic n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Kwenye na njikọ mmiri jụrụ oyi na njikọ ikuku jikọtara
Lelee ma arụnyere ebu n'ụzọ ziri ezi. Gbaa ma debug aka iji kwenye.
Gbanye ike ma tọọ ntọala dịka nrụgide, ọnọdụ okpomọkụ nke mpaghara okpomọkụ ọ bụla, na-ejide oge, na ntinye nri na-akpaghị aka site na usoro PLC.
Gbakwunye ntụ ọka ejikere ejikere na hopper ma ọ bụ gbọmgbọm (aka ma ọ bụ na-akpaghị aka).
Bee extruded PTFE tube na chọrọ ogologo.
Gbanyụọ igwe ma kpochaa ebu mgbe ejiri ya.
7. Akụrụngwa NA Ndozi Ebu
8. AKW ACKWỌ NA AKW ANDKWỌ AKWAREKWỌ AKWAREKWỌ
9. Nhazi usoro
10. MGBE Ahịa ahịa
11. PTFE TUBE LINE AKWUTKWỌ AKWOMKWỌ AKWOMKWỌ
Agụụ akpaka nri, gụnyere abịakọrọ ikuku agbara ịfụ usoro, na-amalite nri usoro, na-asa sooks, mmiri egbe, agụụ generator, PCB njikwa, throughput 30-300 kg / h, dayameta 150mm na elu 600mm, setịpụrụ akpaka nri oge na ịrụzu oge, ntụ eruba bụ controllable, niile anaghị agba nchara ptubeuction, ọgụgụ isi akara.
Ngwakọta agwakọta bụ 600mm na dayameta na 700mm n'ogo, na 2.2kw mbelata moto, ọsọ na-akpali akpali nke 15-25 ntụgharị / min, 8-10mm nnukwu ala efere, na ikike nri nke 75-90kg.
SKVQC-10 Nhazi ndenye:
Nka na ụzụ ji atụ:
12. AKW OKWỌ AKW OKWỌ AKW OKWỌ AHPTR.
Ngwaọrụ Ngwaọrụ Ogologo nke ala ala Ogologo igwe N'ime igwe oghere Oghere dayameta
NKP150 3000-6000mm 2460mm 1000mm 300mm
Recycled ihe ndinuak ptubeuction akara Dicer, igwe ịsa ahụ, igwefụfụ
Ntụ ntụ igwekota / Ntụ ntụ & Enyemaka igwekota Iji mix ntụ ntụ na mmiri mmiri mmanu
Hydraulic mmanya ọnwụ igwe Bee otutu tubes buru ibu dika achoro